Weekly Nepal – Page 834 – Weekly News For All
४ कात्तिक, काठमाडौं । भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत एकजना कोरोना संक्रमितको मंगलबार मृत्यु भएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालका अनुसार नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका–७ का ५० वर्षीय पुरुषको मंगलबार बिहान ९ः५६ बजे मृत्यु उपचारको क्रममा भएको हो
उपत्यकामा थप २ हजार ३८८ नयाँ संक्रमित थपिए
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार ३८८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा २ हजार ८, भक्तपुरमा ९९ र ललितपुरमा २८१ जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। नेपालमा पछिल्लो
काठमाडौँ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। नेम्वाङले ट्वीटर मार्फत आफू कोरोना संक्रमित भएको जानकारी दिएका छन्। उनले आफूसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नको लागि आग्रह गरेका छन ।
सूर्योदय लघुवित्तको खुद नाफामा आकर्षक सुधार, रिजर्भ कोष ४.३२% घट्यो
काठमाडौं । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा खुद नाफा ८७% ले बढेर ३ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यसले १ करोड ९३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद
एभरेष्ट बैंकको नाफामा १७.९९% सुधार, अन्य सूचकमा पनि सुधार
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ३ अर्ब ४ करोड ६१ लाख ९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो नाफा रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा १७.९९% धेरै हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ५८
शान्तिश्री परियारको शसक्त तीज गीत ‘फूलमती चनमती’ (भिडियो)
काठमाडाैँ । सुमधुर स्वरकी धनी गायिका शान्तिश्री परियारको आवाजमा सन्देशमुलक तीजी गीत ‘नाचौँ कि ननाचौँ चनमती’ सार्वजनिक भएसँगै अत्यधिक मन पराइएकाे छ। शसक्त शब्द तथा आवाजमा सजिएको यो गीतका शब्द नेत्र अर्यालका हुन् भने लय खेम सेन्चुरीको हो। गीतमा
के कारणले हुन्छ पिनास? यसबाट कसरी जोगिने ?
काठमाडाैँ । पटकपटक रुघाखोकी लागिरहने मानिसमा पिनास हुने सम्भावना बढेर जान्छ । धुलो, धुवाँ, तथा एलर्जीका कारण नाकमा हुने संक्रमणले पनि पिनासको जोखिम बढाउँछ। नाकको हड्डी बांगो हुनु पनि पिनासको प्रमुख कारण हो । हड्डी बांगो हुँदा सिँगान वा फोहोर पदार्थ
एक किलो सुनसहित थानकोटबाट एक जना पक्राउ
काठमाण्डौ । एक किलो सुनसहित थानकोटबाट एक जना पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाको टोलीले रसुवाबाट काठमाण्डौ आउँदै गरेको बा ९० प २७३६ नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्दा एक किलो सुनसहित रसुवा जिल्ला गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–५ का पेम्बा तामाङलाई
Previous 1 … 832 833 834 835 836 837 Next